माधव नेपाल भन्छन् -कसैसँग विलय होइन, सम्मानजनक एकता हुन्छ | mulkhabar.com
माधव नेपाल भन्छन् -कसैसँग विलय होइन, सम्मानजनक एकता हुन्छ
December 25, 2017 | 10:29 am 275 Hits
काठमाडौं, १० पुस ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विलय नभई सम्मानजनक एकता गर्न लागेको बताएका छन् । पार्टी महासचिव लगायतले माओवादीलाई माइनस गरेर एकता गर्ने अभिव्यत्तिm दिइरहेका बेला नेता नेपालले माओवादीलाई माइनस गरेर एकता हुन नसक्ने बताए । अन्नपूर्ण पोष्टसँग कुरा गर्दै नेता नेपालले भने अहिले माओवादीलाई माइनस गरेर सरकार पनि बन्दैन, एकता पनि हुँदैन । उनले एमाले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठनको पक्षमा जान नसक्ने स्पष्ट पारे ।
धेरै पार्टीको सरकार स्थिर हुन्छ ?
चुनाव जितेपछि वाम गठबन्धनमा जटिलता देखियो नि रु पद नमिलेर हो ?
पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र सरकारको नेतृत्व तीनैवटामा एमालेले दाबी गरिरहेकाले एकीकरणमा जटिलता देखिएको भनिन्छ नि
देशमा विकास होस् र जनताले समृद्धि देख्न पाउन् भन्ने मेरो चाहना हो । पार्टीले दिएको भूमिका म निर्वाह गर्छु । पदका लागि पार्टीमा एक से एक नेता हुनुहुन्छ । आपसी सहमतिमा जस्तोसुकै भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिको विषयमा दुई पार्टीबीच छलफल हुनुपर्छ । मेरो यसमा दाबी छैन ।
काठमाडौं, १४ असोज नेकपाका नेता एवम् पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले देशको समस्या समाधान गर्न नेकपाले बाहेक अरुले नसक्ने दावी…